Daawo Sawiro:- Muruga Leh oo laga helay Qaabkii loo Dilay Col Qadaafi iyo Bistooladiisii Dahabka aheed - iftineducation.com
Daawo Sawiro:- Muruga Leh oo laga helay Qaabkii loo Dilay Col Qadaafi iyo Bistooladiisii Dahabka aheed
aadan21 / February 5, 2016
iftineducation.com – Warbaahinta Caalamka ayaa malamahan si weyn u baahineysay Sawiro cusub oo laga helay qaabkii loo dilay Hogaamiyihii Dalka Liibiya Kolonel Mucamar Alqadaafi, oo ku baxay gacanta maleeshiyaad hubeesan oo riday Dowladiisa.
Weriye ka tirsan Idaacadda BBC-da oo lagu magacaabo Gavriel Gatehouse, ayaa baadi goob u galay nin kamid ahaa maleeshiyaadkii gacanta ku dhigay waxna ka dilay Hogaamiyihii Dalka Liibiya , kaa oo moobeelkiisa ku qaaday sawiro tayo leh oo ku saabsanaa qaabka uu dilku u dhacay 5-sano kahor.
Sawirada uu soo helay Wariyaha BBC-da katirsan ayaa u muuqda kuwa katayo fiican kuwii hore loo baahiyay, waxaana Sawiradan ka muuqda Maleeshiyaadka oo gacanta ku haya Col. Qadaafi kadibna tooganaya.
Waxaa sidoo kale Sawirada la helay ka muuqda qaabkii ay u damaashaadeen maleeshiyaadka dilay Hogaamiyihii dalka Liibiya , kuwaa oo sidoo kale gacanta ku dhigay bistooladii dahabka ka sameesneed uu caanka ku ahaa Hogaamiyihii dalka Liibiya.
Kolonel Mucamar Alqadaafi, ayaa xilka Madaxtinimo ee dalka Liibiya qaab afgambi ah ku qabsaday sanadii 1969-kii, waxaana ugu dambeyn xilka laga tuuray lana dilay Sanadii 2011-kii , xiligaa ay dalka qeybo badan oo kamid ah la wareegeen Malaeeshiyaad hubeesan oo kacdoon xilka uga tuuray Qadaafi.
DAAWO MUQAALKA-Qaabka ugu fiicaan oo naagta ninkeeda ugu siigayn karto
DAAWO VIDEO: Haweenka beesha Gaaljecel oo Ku Dhagan eedeyna u jeediyay Wasiirka Ariimaha Gudaha